Ardayda Kuliyada Injineeriyada ee Jaamacadda Muqdisho oo Bandhig usameeyay Samaynta Magaalooyin cusub iyo Biyo Sifayn |
Ardayda kuliyada Injineeriyada sanadka 4-aad iyo 3-aad ayaa soo bandhigay bandhig samaynta magaalooyin cusub iyo biyo sifaynteeda. Munaasabadaan ayaa waxaa kahadlay maamulka iyo masuuliyiinta ugu sareeysa Jaamacadda Muqdisho.
ugu horayn waxaa kahadlay madaxa xafiiska ardayda ee Jaamacadda Muqdisho ustaad Muuse Axmed Cabdalla ayaa yiri:
“waxaan hubaa inaad tihiin in magaalada Muqdisho quruxdeeda dhanka dhismaha aad idinku noqon doontaan kuwa waxbadan kabadala.”
Ardayda ayaa bandhigooda waxay kusoo bandhigeen dhismayaal kala duwan oo aad uqurux badan kuna saleeyay waxyaabaha ay bulshada ubaahan tahay sida warshadaha, isbitaalada, iskuulada, garoomada ciyaaraha, biyo xereenada, buundooyinka iyo dagaanada ugu quruxda badan ee bulsho kunoolaan karto.
ugu dambayn waxaa munaasabadaas kahadlay guddoomiyaha Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal Cali isagoo yiri:
“Waxaan ku rajo waynahay in dalburburay dhismihiisa sida ugu wanaagsan ay ugu qaybqaadan karto kuliyada Injineeriyada kana tirsan Jaamacadda Muqdisho, waana sababta loo aasaasay Jaamacadda Muqdisho inay kaqaybqaadato dhismaha dadka iyo dalka. waxaadna ogtihiin in dalkeenu uu dhinacyo badan kaburburay cid kaloo inoo dhisaysana aysan jirin dadka lasugaya inay dhisaanna aad kow katihiin.”
“Jaamacadda Muqdisho waxay ku guulaysatay inay mataanayso cilmiga iyo akhlaakhda waana waxyaabaha ay ku guulaysatay ardaydeedu inay yihiin ama kusifoobayn cilmi iyo akhlaakh.”
“Dhisida way dhibadantahay sababtoo ah waa waxa hada ilaa 5 sano ah aad kudhaxjirtaan laakin duminta way fududahay maysan idinku qaadateen inta aad hada waqti gelisaan oo dhanka dhismaha ah.”
“Waxaan idin rajaynayaa guul, horumar, iyo inaad shacbigiina ugu adeegtaan siwanaagsan oo ay ku dheehantahay cilmi iyo akhlaakh, Macalimiintiina iyo maamulkaba ee kuliyada wayku mahadsanyihiin dadaalka dheeriga ah ee ay idin sameeyeen.”